BEZIQHAKAZILE IZINTOMBI EMHLANGENI - Ilanga News
Home Izindaba BEZIQHAKAZILE IZINTOMBI EMHLANGENI
BEZIQHAKAZILE IZINTOMBI EMHLANGENI
lzinto zenzeke ngendlela engajwayelekile eMkhosini walo nonyaka
YIZIMBALI zesizwe uNokubonga, uNqobile Ndlovu noNothando Masuku abebeyingxenye yezintombi ebezihambele uMkhosi Womhlanga eNyokeni,
KwaNongoma ngempelasonto. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
KWENZEKE okungajwa-yelekile eMkhosini
woMhlanga njengoba iSilo uMisuzulu kaZwelithini kaBhekuzulu, siwamukele esigangeni umhlanga wezintombi nto, ebeziyingxinye yalo mcimbi obugubha iminyaka ewu-37 wabakhona, kungafani nangesikhathi sikayise, owayewemukela esibayeni sasesiGodlweni saseNyokeni.
Kulesi sigodlo kuhlala uNdlunkulu Nompumelelo Zulu, uMaMchiza, obekuqala ukuthi yena nabanakwabo abane – uNdlunkulu Sbongile (uMadlamini), uNdlunkulu Buhle (uKaMathe), uNdlunkulu Thandekile (uMaNdlovu) noNdlu-nkulu Zola (kaMafu) – bangabona-kali kulo mcimbi.
ISilo umhlanga siwamukele ngaphandle kwenkundla yezemidlalo, sawushiya khona lapho, kungafani nakuqala lapho wawushiywa khona ngaphakathi esiGodlweni eNyokeni bese kwehlelwa enkundleni sekuyoqhutshwa uhlelo losuku.
ILANGA lihoshe ngomithombo yalo ukuthi iSilo uZwelithini sahamba sithe isigodlo saseNyokeni siyosetshenziswa ukugcina amasiko esizwe.
“Kasazi-ke ukuthi sekushintsheni manje njengoba iSilo singasamukeleki emzini kayise. Umhlanga kawukaze ushiywe esigangeni, selokhu kwathi nhlo ubekwa eNyokeni,” kusho umthombo.
UMntwana Thulani Zulu okhulumela iNdlunkulu kaZulu, uthe umhlanga iSilo siwamukele esigangeni nje, yingoba besenqena ukuthi kuzodleka isikhathi kakhulu njengoba abantu kungafanele ukuba bahlangane isikhathi eside ngenxa yemigomo ehambisana nokulawula ukusabalala kokhuvethe.
“Yebo kuliqiniso ukuthi isigodlo saseNyokeni siyindawo yokugcina imicimbi yesizwe njengawo
uMkhosi woMhlanga, kodwa kangikhumbuli ukuthi kunegama elike laphuma kuthiwa sivinjiwe iSilo ukuba siyekhona, kodwa izi-nto zenzeke ngendlela eyahlukile ukwenzela ukugcina imithetho yokhuvethe.
“Kangikwazike ukuphawula mayelana nokuthi kungani ondlunkulu bebengekho ngoba kangibonanga nokuthi kabekho njengoba nami ngingaphumelelanga emuva kokuba bengingazizwa kahle emuva kokugoma,” kusho uMntwana uThulani.
Uthe imikhosi yesizwe izoqhubeka yize uhulumeni uzobe unge-yona ingxenye yawo njengoba kwasekuqaleni bayiqala ngaphandle kwawo (uhulumeni).
Kusasa (namuhla ngoMsombuluko) ngiyokhuluma namakhosi angaphansi kweLembe ukuze sibone ukuthi yini esingayihlanganisa ukuze umkhosi wokuhlonipha iLembe ube yimpumelelo,” kusho yena.
IMeya yaseZululand, uMfu Thulasizwe Buthelezi, ithe kube yintokozo kubona njengomasipala ukuphinde babe nalo mkhosi.
“Lo mkhosi usimamisa umnotho waseZululand ngokuheha izivakashi ezifike zishiye imali. Nalabo abenza imisibenzi yeza-ndla njengobuhlalu nemvunulo, bahlomula kakhulu.” kusho uMfu Buthelezi.
Uphethe ngokuthi bayaleseka kakhulu izwi leSilo esibusayo, lokuthi amantombazane mawavikelwe futhi ahlonishwe.
Previous articleIlamanisile incoyincoyi
Next articleUtholwe esefile obesolwa ngokweba